VzLinux, distoor kale oo ballan qaada inuu noqon doono bedelka ugu habboon ee CentOS | Laga soo bilaabo Linux
Shirkadda Virtuozzo (markii hore qayb ka mid ah Isbarbardhiga), oo soo saareysa softiweerka adeegsiga kumbuyuutarka ee ku saleysan mashaariicda ilaha furan, ku dhawaaqay maalmo ka hor bilowga qaybinta cusub ka yimid Linux, loo yaqaan "VzLinux", kaas oo horey loogu adeegsaday inuu yahay nidaam hawlgal salka ah oo ay soo saartay barmaamij-hawleedka iyo badeecooyin ganacsi oo kala duwan.
Hada laga bilaabo, VzLinux qof walba wuu heli karaa oo waxaa loo taagay bedelka CentOS 8, oo diyaar u ah geynta wax soo saarka.
Virtuozzo wuxuu leeyahay taariikh dheer oo kafaala qaada oo wax ku biiriya mashaariicda ilaha furan loo aqoonsan yahay OpenVZ, KVM, Docker, OpenStack, CRIU. Ku tiirsanaanta shirkadda ee ku saabsan baahinta VzLinux waxay horseedday u beddelasho gudaha ah oo ka badan 200 oo xarumood oo CentOS ah, iyadoo la hubinayo in kaabayaasha Virtuozzo ay yihiin kuwo mustaqbalka caddeyn u leh wixii ka dambeeya Diseembar 2021, markaasoo CentOS loo qorsheeyay inay dhammaato.
Waa hormuudka qaybta, kaasoo soo saaray tiknoolajiyaddii ugu horreysay ee konteenarrada suuqa laga heli karo muddo 21 sano ah. Shirkadda waxay siisaa xalal iyo adeegyo softiweer in ka badan 450 adeeg bixiyeyaal, FLIs iyo shirkadaha adduunka oo dhan si ay u abuuraan in ka badan 500.000 deegaanno dalwaddii ah, oo ku shaqeynaya culeysyo shaqo oo muhiim ah daruuraha.
1 Ku saabsan VzLinux
2 Soo dejiso oo hel VzLinux
Ku saabsan VzLinux
Waa la iftiimiyay VzLinux waa la heli karaa iyada oo aan xaddidneyn, waa lacag la'aan hadda laga bilaabo waxaa loo horumarin doonaa sidii mashruuc il furan ah, oo lagu horumariyey kaqeybgalka bulshada. Qaybinta waxay yeelan doontaa wareeg dayactir dheer, oo u dhiganta wareegga sii deynta cusboonaysiinta ee RHEL 8.
Sawirka rakibida la soojeediyey waxaa loogu talagalay in lagu rakibo qalabka caadiga ah, laakiin mustaqbalka taas ayaa lagu sheegay Laba daabacadood oo dheeri ah oo loogu talagalay in loogu isticmaalo konteynarrada iyo mashiinnada farsamada ayaa la qorsheynayaa in la sii daayo.
Isla mar ahaantaana, dhismaha hadda jira waxaa horeyba ugu jira waxyaabo loogu talagalay shaqo hufan oo hoos timaada xakamaynta Virtuozzo, OpenVZ iyo KVM, iyo sidoo kale qaabab loogu dirayo nidaamyada daruuraha AWS, Azure iyo GCP.
"Suuqa qaybinta Linux wuxuu ka sii fogaanayaa xarumaha Linux ee ay maamusho Linux-ka iyadoo la siinayo qorrax dhaca qorshaynta qaybinta sanadkaan gudihiisa," ayuu yiri Maik Broemme, Maamulaha Wax soosaarka Sare ee Virtuozzo. Farqiga ka dhashay suuqa wuxuu u baahan yahay xal lagu kalsoonaan karo oo cimri dherer ah, waana sababta aan u dooranay inaan ka dhigno VzLinux-kayaga meel fagaare ah. Hadafkeenu waa inaan si fudud u siino wershadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo xor ah oo leh awood kala guur aan xuduud lahayn. "
Si deg deg ah loogu wareejiyo VzLinux ee xalalka jira iyadoo la adeegsanayo CentOS 8, utility gaar ah ayaa la siiyaa kaas oo taageera socdaalka mashiinnada dalwaddii iyo nidaamyadii lagu rakibay qalabka aasaasiga ah. Virtuozzo waxay kaloo bixisaa shaqooyin dheeri ah si loo bixiyo shaashado si loo badalo isbeddelada haddii ay jiraan dhibaatooyin tahriib iyo otomaatigga wareejinta kooxda adeegga.
Mustaqbalka, waxaa la qorsheeyay in la bixiyo koronto ka soo haajirta CentOS 7, ku dar wakiil wakiilka nidaamyada keydinta Acronis, oo bilow inaad dirto Virtuozzo Linux Enterprise Edition oo lagu dhisayo taageero ganacsi iyo balastarro nool oo kuu oggolaanaya inaad cusbooneysiiso kernel adigoon dib u bilaabin. Sanadka soo socda waxaa la qorsheynayaa in lagu daro daabacaadda daabacaadda ee Hoster Edition si loogu isticmaalo nidaamyada martigelinta.
Soo dejiso oo hel VzLinux
Kuwa xiiseynaya inay ka heli karaan VzLinux, waa inay ogaadaan in nooca cusub ee 8.3-7 loogu talagalay soo dejinta iyo sidoo kale koodhka isha si dib loogu dhiso qaybinta iyada oo la raacayo xirmooyinka Red Hat Enterprise Linux 8.3.
Dhismooyinka la bixiyay waxaa loo diyaariyay naqshadaha x86_64 waxayna ku yimaadaan laba nooc: buuxa (4.2G) iyo isafgarad (1.5G). Sawirada nidaamka loogu talagalay OpenStack iyo Docker ayaa si gooni gooni ah loo diyaariyay. VzLinux waa u hoggaansamida RHEL si buuxda oo laba-gees ah waxaana loo isticmaali karaa in si habsami leh loogu beddelo xalka ku saleysan RHEL 8 iyo CentOS 8.
Ugu dambeyntii, hadaad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato ku saabsan qaybinta cusub ee Linux, waad hubin kartaa faahfaahinta Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » VzLinux, distoor kale oo ballan qaada inuu noqon doono bedelka ugu habboon ee CentOS